Syria nanafintohina Syria an'i Syria ho harbinger: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 10 Oktobra 2019	• 6 Comments
Somary mampihomehy kely ny fihetsik'ireo mpanao politika holandey omaly tamin'ny fanafihana Tiorka tany Syria Avaratra. Tao anatin'ny gazety iraisampirenena nandritra ny andro maro no nanatonan'i Torkia ny Etazonia ary nanaisotra ny tafiny i Trump hanolotra ny fanafihana Tiorka. Antsoinay hoe 'mustard aorian'ny sakafo' izany. Avy eo dia mitsinjo mialoha ny firenena toy izany ianao fa tsy hitomany rehefa tara. Mety ho mazava ankehitriny fa ny mpanao politika dia mahalala ny sora-tanana voalaza etsy ambony ary amin'ny ankapobeny ny hetsika ho an'ny "Endrey ny fahatezeranay"Play. Nisintaka tamin'ny mpiady YPG i Kurzika izay zatra niady tamin'ny IS-namboarin'ny tenany taloha (ISIS taloha). Hafahafa aminao ve izany, hoy aho fa noforonina IS? Avy eo ianao dia tsy maintsy mahita aloha amin'ny alàlan'ny script master.
Ny script master dia hoe i Turkey dia nitombo tamin'ny fahefana. Nila fomba hanomezana herinaratra ho an'izany i Torkia ary midika izany fa ny fandosiran'ireo mpitsoa-ponenana any Eropa. Tamin'ny fanombohan'ny ady tany Syria tamin'ny alàlan'ny tafika mpomba an'ny tena, dia tsy ny indostrian'ny fitaovam-piadiana ihany no manampy anao, fa i Turkey dia mitazona paompy volamena. Raha nanokatra ny vavahadin'ny fandosiran'ny mpitsoa-ponenana ho any Eropa i Turkey, dia miteraka korontana any Eropa izany. Ho an'izany dia tsy maintsy misy tsindry kely amin'ilay onjam-peo, toy ny tilikambo misy rano izay manery ny ony. Koa nisy ady nanomboka tany Siria. Ady iray izay manery ny mpitondra amin'ny alàlan'ny mpitsoa-ponenana marobe. Nandritra izany fotoana izany, ny serivisy tsiambaratelo iraisam-pirenena avy any Holandy sy ireo firenena hafa dia nanampy tamin'ny fomba tsara tarehy tamin'ny 'tsy nahavita na inona na inona' hamelezana ireo jihadists rehetra izay mazoto hankany Syria. Io no fomba anamboaranao ny tafika mpizara ary hitazomana ny fisehosehoanao ara-politika amin'ny alàlan'ny fandaharan-dresaka miaraka amin'ireo mpanao politika tezitra sy Jeroentjes Pauw sy Matthijs van Nieuwkerkjes izay afaka manakimpy ny mason'ireo vahoaka (manohitra ny karama lehibe).
Nandritra izany fotoana izany i Turkey dia nanangana indostrian'ny tafika mahery vaika teo ambanin'ny vanim-potoanan'ny AKP sy Erdogan, izay tsy nisy nifantoka akory akory. Afaka mamokatra frigates lehibe an-dranomasina izao izy, mamokatra fiara mifono vy, drôna, miady angidimby miady amin'ny tsara kokoa noho ny Apache ary mba ho vita ny lisitra. Manana tafika izay firenena lazainao koa ny firenena ary raha izany no zava-dehibe ao anatin'ny andro vitsivitsy mihodina manerana an'i Eoropa. Nahavita ny nataon'i Alemaina tamin'ny 30 tamin'ny taonjato farany i Torkia, fony tsy nisy olona niraharaha. Izy io dia manana tafika faharoa lehibe indrindra ao anatin'ny alanin'ny NATO (aorian'ny Etazonia); fa ny firaisana izay tsy misy intsony, satria tezitra amin'i Torkia ny EU ary ny minisitry ny Stefje Blok dia maniry an'i Torkia zon'ny fifidianana ao anatin'ny OTAN sy i Etazonia dia efa nifamaly tamin'i Torkia ary nampihatra sazy. Ireo sazy ireo no nahatonga ny lira Tiorka hianjera be, fa mifanohitra amin'izay heverintsika fa ny vokatr'izany dia mahasoa miafina ho an'ny toekarena Tiorka. Tsy vitan'ny hoe mamokatra mpizahatany be dia be (satria fialantsasatra mora), fa tsara indrindra ho an'ny fanondranana. Koa satria mamokatra fitaovam-piadiana marobe mihoatra noho izay fantatrao angamba i Torkia, dia tsara tokoa ho an'ny indostrian'ny tafika izany, mba hahafahanao mampiditra vola azy.
Afaka mamokatra saika ny zava-drehetra i Torkia ary manana jet mpiady amin'ny taranaka 5e aza eo amin'ny fampandrosoana. Turkey dia vonona amin'ny fisintonana efa ela nokasain'i Eropa tamin'ny alàlan'ny Blitz Krieg. Ho an'izany, ilaina raha toa ka misy ny korontana any Eropa ary ny Brexit dia natao ho an'ity, saingy hanampy ihany koa izany fa ny polarazation eo amin'ny ankavia sy ny havanana dia nitombo amin'ny fahitana lehibe (amin'ny fampihorohoroana namboarin'ireo serivisy). Ny wick dia tsy maintsy atsipy ao anaty sisin'ny vovony ao anatin'ny sisin'ny EU. Mpampiasa media vitsivitsy misimisy kokoa amin'ny fanafihana-sehatra; izany dia hanao fahagagana. Raha manambatra ny manafintohina ao Syria Avaratra i Tiorka amin'ny fanokafana ny fidiran'ny mpitsoa-ponenana mankany Eropa (satria ny EU dia tsy te handeha amin'ny alàlan'ny fanohanana 6 miliara amin'ny fanohanana; satria ny EU dia nanenjika azy nandritra ny taona maro niaraka tamin'ny fidirana an'i Tiorkia tao amin'ny Vondrona Eoropeana ary satria tsy te hanohana ny faritra azo antoka ny EU amin'ny fandraisana mpitsoa-ponenana any avaratra Syria), avy eo ireo mpiady Ex-IS ilaina dia mikoriana any Eropa ary avy eo afaka mamindra ny ady amin'ny mpizara any amin'ny faritany eoropeana ianao ary manana ny olana ianao, izay ahafahan'i Torkia lasa mpamonjy.
I Trump izao dia manala ny mpiady Kiorda YPG toy ny biriky, (raha mahita ny sora-tanana master) mazava tsara. Mety hanome tsiny an'i Trump indray ny EU, fa lasa ahitantsika tsikelikely an'io fahagagana politika io.
Efa mialoha ny fitsanganan'ny fanjakan'ny Ottoman ary i Tiorkia dia manana ny fananana rehetra isika. Izany fotsiny dia araka ny script script, fa hanazava izany indray aho ao amin'ny bokiko vaovao. Efa noresahiko matetika tao amin'ilay tranokala io fa indraindray dia ela no ihodanan'ny penina. Tiorka no herin'ny tontolo vaovao ary i Etazonia no fanjakana Romanina Andrefana amin'ny faran'ny latinina latina. Ny marika 'mety' vita tsara (miaraka amin'ny eritreritra mitsikitsiky amin'ny alàlan'i Trump) dia hitobaka amin'ny fipoahan'ny toekarena amerikana. Hiatrika Trump izany ary hitsangana indray ny filana politika taloha. Mandritra izany fotoana izany, ny fihetsika manohitra ny fanatontoloana ary mitsikera ny fandaharam-potoana momba ny toetrandro no iatrehana; satria izay rehetra mifandray amin'ny marika 'mety'. Ny làlan'ny làlan'ny fitondram-panjakan'izao tontolo izao dia tsy maintsy ho apetraka tanteraka, mamela ny 'marika' marika hanomezana fahefana hanome tsiny azy noho ny loza ara-toekarena sy ny korontana. Ity farany dia miandry ny an'i Etazonia sy i Eropa. Ary avy eo nanjary nanomboka ilay kintana romana taloha tranainy: "Ordo ab Chao. Mamorona korontana aloha ianao ary avy eo averinao ny filaminana. Izany baiko vaovao izany dia avy any Erdogan any Eropa, izay no vinavinanako nandritra ny taona maro. Raiso lesona lesona tiorka.
Ny fihaonan'ny OTAN: ny fahanginan'ny media momba ny fifandonana mety amin'ny fifamatorana amin'i Tiorkia mankany amin'ny EU
Tags: fanafihana, EU, Featured, voatsoaka, toby, Kiorda, Kurdish, OTAN, Noord, manafintohina, Syria, indray, vorontsiloza, VS, YPG
10 Oktobra 2019 ao amin'ny 09: 17
16 Oktobra 2019 ao amin'ny 18: 43
16 Oktobra 2019 ao amin'ny 18: 44
Ny führer dia manana tetika ...
16 Oktobra 2019 ao amin'ny 19: 21
Efa ela no naorina ilay drafitra ary (araky ny nitantara ny fotoana taloha) dia misy nosy tsara tarehy 50 amin'ny fototry ny Incirlic. Avy any Etazonia izy ireo, saingy amin'ny maha-mpikambana ny OTAN dia i Erdogan mazava ho azy tsara ny manantona ireo zavatra ireo ao ambanin'ny fiaramanidina ary izy koa manana ny lakilen'ny tokotanin'ny tany.
I Turkey tampoka dia lasa hery niokleary tampoka! Eureka!
17 Oktobra 2019 ao amin'ny 20: 11
Ny tsimoka voalohany dia nomen'ny lucifianana, azonao jerena fa nanatanteraka ny andraikiny i Erdogan ho soavaly TrojanO. Mieritrereta fa misy fifanoherana anatiny ary mandritra izany fotoana izany dia aparitaka ny masom-pasika eo imasony miaraka amin'ireo tatitra mifanohitra (jereo ihany koa ny Brexit). Hojerentsika hoe ahoana ny fahalavoana ny dominoes ..
Nandritra ny taona maro izao aho dia nifantoka tamin'ny famakafakana be dia be momba ny resaka Syria, miaraka amin'ny fanamafisana ny maha-zava-dehibe ny firenena amin'ireo elan'izao tontolo izao ho toy ny detonator iray tsara na geopolitikaly; ny domino voalohany tao anaty rojo domino izay mety hiteraka ady mahakasika ny fahefana iraisam-pirenena. Mino aho fa hivoatra amin'ny lafiny maro ity ady ity, ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny lafiny ara-toekarena, fa mety ho lasa ady fifampitifirana nahitana mpisehatra marobe izany.
Araka ny efa nolazaiko tao amin'ny lahatsoratra teo aloha, ny hetsika geopolitika dia araraotin'ny fananganana globalisista ho fanelingelenana sy firakofana ho an'ny fanapotehana ny toekarena. Mila scapego ho an'ny fitrandrahana ny zavatra rehetra ny Bubble, fipoahana natombok'izy ireo tao 2018 miaraka amin'ny paikady famatsiana ny rano izay efa nanafaingana ny krizy ara-bola feno. Ny fanafihana Tiorka an'i Syria dia mety ho hetsika manelingelina tampoka.
Ny hoe "fialana" amerikana dia tsy fanalana azy, mialoha ny fifandirana lehibe iray izay mahasoa ny globalist cabal.
17 Oktobra 2019 ao amin'ny 22: 01
rifian, tsara sy mahafinaritra daholo fa raha ny miahiahy matetika no asaina manao ny anjara toerany ao amin'ny script Kabbalah Pike dia tsy misy hanohitra an'izany. Befehl dia tsy mety befehl…
« Extinction Rebellion andiany mpikatroka voaloa
Ilay talen'ny fikomiana tamin'ny Extinction Margaret Klein Salamon: "Ny dingana manaraka dia ny maneho hoe marina ny fahamarinana" »
Total visits: 13.101.567
Camera 2 op Ny 'fianakavian'ny matoatoa' PsyOp (asa ara-tsaina): manaisotra ny fahafahanao ary mampiditra ny 'polisy polisy'
leapfrog op Ny 'fianakavian'ny matoatoa' PsyOp (asa ara-tsaina): manaisotra ny fahafahanao ary mampiditra ny 'polisy polisy'